Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Mahaiza ihany miala bala e !
Inty sy nday: Mahaiza ihany miala bala e !
Eo anoloan’ny fihazakazaka ny fiakatra ny vidim-bary dia nahavariana sy nanaitra ny maro ny nandre ny tenin’Ingahy Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier nilaza hoe « tsy tompon’andraikitra ny amin’izany irery ny fitondram-panjakana ». Nambarany fa ny rehetra no tompon’andraikitra.
Dia fialana bala mivantana izao ange izany nambarany izany e ! Raha ny marina, inona ihany no andraikitra ny fitondram-panjakana izany ? Ny tsy fandriam-pahalemana, hoy izy, tsy andraikitra ny fitondrana samirery. Ny fahapotehan’ny firenena sy ny fahantram-bahoaka mihoa-pampana koa, tsy andraikitra ny fanjakana irery. Ny kolikoly avo lenta koa angamba dia holazainy fa « andraikitra ny rehetra ».
Isika tsy hiady hevitra ny amin’izay fifanilihan’andraikitra fa araka ny nambara teto hatrany aloha tany dia matoa nanolo-tena hiditra ho mpitondra fanjakana ianareo dia nahim-ponareo aloha. Ankoatra izay, mba hahavitanareo ny andraikitrareo eo anivon’ny firenena dia nomena anareo avokoa ny antoka hahombiazan’izany, na fahefam-panjakana na volam-panjakana na fitaovam-panjakana na mpiasam-panjakana. Tsy izany ihany fa karamaina ianareo, ary karamabe. Iantohan’ny vahoaka avokoa ny zavatra rehetra ilainareo amin’ny fiainanareo manokana : Trano ipetrahana sy iasana. Mpanampy any an-tokantrano. Mpamily. Sy ny maro tsy ho voatanisa.
Ny antony dia mba hifantohanareo mpitondra 100% amin’ny asa nankinin’ny vahoaka taminareo.
Noho izany, rehefa tsy te ho tompon’andraikitra ianareo dia ny mametra-pialana no sahaza anareo. Raha tsy izany dia hataon’ny vahoaka amin’ny fanaovana azy ianareo. Tandremo.